Ukuphupha kukaYesu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ayisiwo kuphela amakholwa anokuba namaphupha anexabiso ngokwenkolo. Iimpawu zenkolo ezinje ngomnqamlezo zibonakala rhoqo kwi el mundo yamaphupha. Kodwa uYesu Krestu, uNyana kaThixo, naye uhlala enamava njengomfanekiso wephupha. Ubomi bakhe kunye nokufa kwakhe kukhunjulwa kwirosari.
Olu phawu lwe-archetypal lokholo, olubonisa ukubandezeleka kunye nokunyamezelana, ayisoloko iyiphupha nje lomsebenzi okanye umzekelo. Fumana kwinqaku elilandelayo ukuba yintoni uphawu lwephupha "uYesu" elinokumela:
1 Uphawu lwephupha «uYesu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uYesu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uYesu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uYesu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uYesu Krestu ubonakala njengomfanekiso wephupha ephupheni, kukho iindlela ezahlukeneyo zokutolika. Zezona zitoliko zilungileyo. Unokuba nguMsindisi we Izitya ukuba uswele, uMhlanguli ohlangula amaphupha abo okubandezeleka.
Ukuba iphupha libona uYesu emnqamlezweni, luphawu lokuba uncedo luya kusondela. Ukuba umntu ophuphayo uyathandaza emntwaneni kaThixo ngelixa elele, akazukufumana kuphela ukuqiniswa elukholweni, kodwa uya konwaba ebomini. Ngokubanzi, uphando lwamaphupha lukwabona umfanekiso wephupha "uYesu" njenge ukululeka Vumela lowo uphuphayo angaphulukani nokholo, ukuba ufuna ukonwaba nokwoneliseka.
Ukuba iphupha libona uMesiya kwindlu engaqhelekanga ngelixa elele kwaye yena ngokwakhe engena apho, kodwa angaphumi, oko kunokuba ngumqondiso wokufa kwakhe, kodwa kwanokufa kwakhe. usindiso icandelo.
Ngamanye amaxesha ngokuvela kwalo mqondiso wephupha, imiyalezo iyaziswa. Ingqwalaselo eyodwa kufuneka inikwe kwezi ekucaciseni amaphupha. Oonozakuzaku, uYesu waseNazarete ayalela amaphupha, athathelwa ingqalelo.
Ukuba ukhumbula iingxelo eziphambili zale miyalezo, ungaphanda ngokukhawuleza iisimboli zamaphupha ezizodwa kwaye uzibeke kwimeko ngoncedo lwesichazi-magama sephupha kweli phepha. Ngendlela, unokukhangela ngokulula iisimboli usebenzisa umsebenzi wokukhangela ngasekunene kweli phepha.
Ukubandezeleka kukaKristu kunokubonakaliswa ngokufuziselayo kwintyatyambo ethandekayo. Ukuba loo ntyatyambo okanye isityalo sibonwa ephupheni, oku kunokuqondwa njengophawu lomzuzu olusizi. Inkumbulo kaYesu ikwabonakaliswa ngokubhiyozela umthendeleko enkonzweni. Nabani na okubonayo ephupheni lakhe akufuneki ancame ukuzimela kwakhe ngenxa yomnqweno oqwalaselwe kakubi.
Nabani na obona isigqubuthelo sikaYesu ephupheni lakhe unokujongana nesifo esiza kudibana nentlungu kunye nokukhathazeka.
Uphawu lwephupha «uYesu» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kubona amaphupha aneempawu zonqulo njengophawu lokuba ukuphupha malunga intsingiselo yobomi kufuneka uzame. Umfanekiso oqhelekileyo wephupha kule meko nguYesu Krestu one-halo.
Ngamanye amaxesha olu phawu luphupha lukwangumqondiso weengxaki ingaphakathi ibhalansi yokuphupha. Ukuba ukuphupha kwihlabathi lokuvuka kuyinkolo kakhulu, ukubonakala kukaKristu kwihlabathi lamaphupha luphawu lobudlelwane bakhe nokholo kwaye ngamanye amaxesha kubonisa ukungathandabuzeki.
Rhoqo kuphando lwamaphupha, uphawu lwephupha "uYesu" lisetyenziswa njengembonakalo ubuntu itolikwe ngokuphupha. UYesu ophuphileyo ubonakalisa onke amathuba omntu ofuna ukugqibelela ngakumbi nangakumbi. Ke ngoko, kuya kufuneka ubuze iphupha lakho ukuba phuhliso sebenza, phuhlisa ngakumbi kwaye uzazi. UYesu ngumcebisi kunye notitshala kule nkqubo. Ukuba umntu uphupha ngokunyuka kukaKristu, oku kungabonisa utshintsho olwazini.
Umfanekiso wephupha "uYesu" unokukhumbuza iphupha ukuba ungalahlekelwa lukholo kuwe nakuThixo.
Uphawu lwephupha «uYesu» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha okomoya, umfanekiso wephupha "uYesu" umele oko Ukhutshiwe y Tolerate.